Raspberry Pi OS inowedzera Microsoft repository | Linux Vakapindwa muropa
Vaverengi vedu vese vanoda Microsoft, handiti? Zvakanaka, pamwe vazhinji venyu munoda kuve kure nehukuru tekinoroji uye zvese zvakasarudzika. Izvi zvichangobva kuoma zvakanyanya mu Raspberry Pi OS, iyo inoshanda system yekambani yeRaspberry yemabhodhi ayo ayo akaita shanduko iyo nharaunda isiri kunyanya kufarira. Uye iyo shanduko yakaverengerwa pasina yambiro uye nekutadza, kunyangwe mune dziripo kuiswa.
Ini, uyo anofarira kushandisa Manjaro ARM pane yangu Raspberry Pi uye atiza iyo yepamutemo sisitimu yekusaida zvachose uye nekuikanganisa kakati wandei, ini ndakaziva nezve idzi nhau kubva chinyorwa chakaburitswa muHot Hardware. Ikoko vanotsanangura kuti Raspbian yave iripo kubvira 2015 2012 uye kuti nharaunda yakanga isati yanyunyuta zvakanyanya, kusvika parizvino, apo Raspberry Pi OS ichangoburwa iwe waisa Microsoft APT repository pane zvese zvishandiso uchishandisa iyo inoshanda sisitimu.
1 Raspberry Pi OS yakawedzera Microsoft repo isina kukumbira mvumo
2 Microsoft inogona kuongorora vashandisi
Raspberry Pi OS yakawedzera Microsoft repo isina kukumbira mvumo
Izvo zvaasiri kufarira zvishoma ndechekuti repository inowedzerwa otomatiki uye pasina mvumo. Icho chikonzero kutsigira kweMicrosoft IDE (Yakabatanidzwa Yekuvandudza Nzvimbo) uye Visual Studio Code (VSCode), iyo isina kushata pakutanga. Chakaipisisa ndechekuti inoisa kunyangwe pamifananidzo isina mushandisi interface, uye izvi zvinotungamira kune yega yega nguva iyo "apt kugadzirisa" yekuraira inoshandiswa, iyo system pings Microsoft.
Mushandisi makumi mana_n_2 tsanangura kuti:
Nekuve neichi chinongedzo, pese panogadziriswa Raspberry Pi OS, Microsoft server ichaiswa. Microsoft ichaziva kuti urikushandisa Raspberry Pi OS / ingangoita Raspberry Pi muridzi uye yako IP kero. Vanhu vazhinji vanoedza kudzikisa nzvimbo yacho nepazvinogona napo, saka aya matatu mamwe mapoinzi edhata ayo Microsoft inogona kushandisa kugadzira yako.
Microsoft inogona kuongorora vashandisi
Zvinoenderana neReddit mushandisi Microsoft inogona kuzivisa vanhu seRaspberry Pi OS vashandisi pavanowana mamwe masevhisi seBing kana GitHub, zvese zviri zveMicrosoft, nechinangwa chekugadzira chimiro kuratidza kushambadzira kwega. Chaizvoizvo, iyi ndiyo imwe yetsika idzo Apple inoda kurwa neshanduro dzichangoburwa dzeIOS / iPadOS kana Mozilla, iyo inosanganisira maturusi akadai seayo ETP (Enhanced Tracking Dziviriro) kana basa mu Firefox 85 iyo inoparadzanisa marongero uye sarudzo nemapeji ewebhu.
Wedzera iro repository zvingaite zvine musoro kune VSCode vashandisi, asi icho chinhu icho isu tese chatinoshandisa. Uye kuti pese panochengetwa zvinyorwa, timu yedu "kufonera Microsoft" harisi iro bhizimusi rakanakisa pasi rese. Zvakawanda zvekuti vamwe vashandisi vafunga kusiya Raspberry Pi OS, uye hazvishamise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi OS inowedzera Microsoft repository iyo vashandisi isingadi
Uye tinoibvisa sei?
Pindura kuna Nidea
Iyo LinuxAdictos hofisi. Kupindura kuvaverengi nzira yechinyakare
Solus 4.2 inouya neLinux 5.10, Budgie 10.5.2 uye nezvimwe